Fanamafisan'i Shina ho an'ny mpanamboatra mpamatsy sy mpamatsy - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd.
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Fitiavana ho an'ny trano fambolena
Mifantoka amin'ny famolavolana, ny fikarohana, ny famolavolana, ny famokarana ary ny fivarotana ny tsena metaly, ny vokatra HVAC, ny mambra, ny Auto, ny fanorenana ary ny indostria hafa. Noho ny traikefa ananantsika sy ny tolotra miavaka, dia nekena ho mpamatsy azo antoka ho an'ny mpividy iraisam-pirenena maro isika.
WENAP dia orinasa varotra izay manandanja amin'ny fitaovana an-dakozia, toy ny serivisy kodiaran-koditra, fametahana serivisy fitahirizana, famolahana baoritra, tambajotra sy bolina, andian-tsambo, andian-tsambo, tranokely, fanaka plastika ary zavatra hafa mifandraika amin'izany.
Ny tsara indrindra ho an'ny fanoloana ny fametrahana ny kitapo very, na ny fanoloana ny olona voazara, ny karazan-tsika "ikea-style" Ny fitaovana hosodoko dia mety ho vahaolana amin'ny tetik'asa DIY. Azo ampiasaina amin'ny fampakaram-bady avy amin'ny mpamokatra lehibe indrindra, ny fitaovam-pandrafetana an-tsokosoko dia tonga araka ny filànareo.
Tongasoa eto amin'ny tranokalan'ny WENAP, Ny tranofiaranay sy ny efitranony ivelany dia mametaka takelaka fitaovam-pako 5 taona amin'ity sehatra famahana ity. Ny entrainaly sy ny kofehy ivelany dia mampiditra ny nut nut dia iray amin'ireo vokatra lehibe indrindra azontsika atao, azontsika atao izany amin'ny varahina, ny vy, ny vy, Carbon steel, ny vy sy ny legioma. , ISO, GB standard. Azontsika atao ny manamboatra karazana karazana entana sy fantsom-boky ivelan'ny ivelany, ary avy eo dia azonao atao koa ny mamolavola ny vokatra tadiavinao, raha manana ny santionany na ny sary ianao.